Poland oo qaadacaysa kulan ka dhacaya maanta Jerusalem – Kasmo Newspaper
London (Kasmo), Poland ayaa qaadacday ka qaybgalka kulan 2 maalmood ah oo Jerusalem uga furmaya maanta dalalka la baxay ‘Visegrad’, ka dib markii Poland ku eedeysay Ra’iisal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, ‘midabtakoor’ la xiriira ereyo ka soo yeeray laakiin uu isagu beeniyay.
R’iisal Wasaaraha Poland, Mateusz Morawiecki ayaa isagana caddeeyay in dalkiisu ka baaqday kulanka xitaa ereyadii ugu dambeeyay ee cuslaa ee ka soo yeeray Wasiirka cusub ee Arrimaha Dibadda Israel, Yisrael Katz dartood.
Katz wuxuu ku eedeeyay dadweynaha reer Poland in ay gacan siiyeen Naasigii Jarmalka oo sida uu u dhigay ‘caanaha hooyada la nuugeen’.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli Midowga Yurub qudhiisu dadaal ugu jiray sidii mowqif midaysan looga yeelan lahaa sidii Jerusalem ayan u noqon lahyn Caasimadda Israel.
Visegrad Four oo loo soo gaabiyo V4 waa isbahaysi la asaasay sanndkii 1991kii ku fadhiya dhaqanka iyo siyaasadda kana dhexeeya 4ta dal ee ku yaalla bartamaha Yurub oo kala ah Ceck Republic, Hungary, Poland iyo Slovakia.
Tags: Mateusz Morawiecki Poland